February 2022 - Page2of 26 - Shwe Pann Thee
သင်သိပြီးပြီလား…မိန်းမတွေရဲနှုတ်ခမ်းကနေသိနိုင်တဲ့ သိကောင်းစရာ (၇) ချက်သင်သိပြီးပြီလား…မိန်းမတွေရဲနှုတ်ခမ်းကနေသိနိုင်တဲ့ သိကောင်းစရာ (၇) ချက်
သင်သိပြီးပြီလား…မိန်းမတွေရဲနှုတ်ခမ်းကနေသိနိုင်တဲ့ သိကောင်းစရာ (၇) ချက် နှုတ်ခမ်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ (၇) ချက် မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာနဲ့ မပြောတဲ့ အချက်များစွာရှိတာ သိပါသလား။ နှုတ်ခမ်းအကြောင်း သိကောင်းစရာအချက်တချို့ ဝေမျှသွားပါမယ်။ နှုတ်ခမ်းဟာ မိမိတို့ရဲ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ...
ဒူးနာရောဂါရှိသူများ အတွက် ရှောက်ဘီလူးနှင့် ကြက်သွန်နီဒူးနာရောဂါရှိသူများ အတွက် ရှောက်ဘီလူးနှင့် ကြက်သွန်နီ
ဒူးနာအတွက် လွယ်ကူသော ဆေးတစ်လက်ကျွန်တော်သည်ဒူးနာဝေဒနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။၁၉၉၅ခုကကားတိုက်ခံရစဉ်ပေါင်သုံးပိုင်း ကျိုးသည်နှင့်အတူဒူးကိုပါအနည်းငယ်ထိခိုက်မိပါသည်။ ထိုစဉ်မှစ၍ယနေ့တိုင်ဒူးသည်အနည်းငယ်မျှမသိမသာရောင်ရမ်းနေသလိုအတန်ငယ်လည်းတင်းနေပါသည်။ထို့ကြောင့်ဒူးနာပျောက်ဆေး မျိုးစုံအားသုံးစွဲခြင်းလေ့လာဖော်စပ်ခြင်းများ.ပြုခဲ့ပါသည်။ ဒူးနာခြင်းသည်ဒီဘက်ခေတ်၌အတော်လေးအဖြစ်များနေသည်ကိုသတိထားမိသည်။မိမိမှအလှူအတန်းလုပ်တိုင်းအခန်းအနားတစ်ခုခုလုပ်တိုင်း။ ဒူးနာတတ်သည်ှုသက်ကြီးရွယ်အိုဝေဒနာရှင်တို့အတွက်အဆင်ပြေစေရန်ကုလားထိုင်များကိုသီးသန့်စီစဉ်ပေးနေရပါသည်။တချို့လည်းဒူး နာတာကိုအကြောင်းပြု၍မလာရောက်နိုင်ပါကြောင်းဖုန်ုးဖြင့်တောင်းပန်ကြပါသည်။ ခက်သည်ကဒူးနာရခြင်း၏အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေကများလှပါသည်။ အရိုးမှနာခြင်းအရွတ်မှနာခြင်းချင်ဆီမှနာခြင်းကြွက်သားမှနာ ခြင်းအကြောမှနာခြင်းအဆစ်မှနာခြင်းအပူငုတ်၍နာခြင်းတီဘီရော ဂါကင်ဆာရောဂါလေးဘက်နာကြောင့်နာခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရာမှဒဏ်ဖြစ်သွား၍နာခြင်းလေးဘက်နာရောဂါကြောင့်နာခြင်းဂေါက် ရောဂါကြောင့်နာခြင်းယူးရစ်အက်ဆစ်လွန်ကဲနေ၍နာခြင်းစသဖြင့်အကြောင်းရင်းတွေကစုံလှပါသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကကောင်းသည်ဟုရည်ညွန်းသော်လည်နောက်တစ်ဦးအတွက်တော့မထူးခြားဖြစ်နေတတ်သည်။အနာနဲ့ ဆေးမတွေ့၍လမ်းလွဲနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ်၂၀ကျော်ကအလွန်လွယ်ကူ၍ကုန်ကျမှုနည်းပါးသောဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်လက်ကိုနက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖတ်ဘူးခဲ့သည်။ရေးသူကကျောင်းဆရာမဆိုတော့ပို၍သဘောကျပါသည်။ သူကတော့တစ်သက်လုံးမပျောက်တော့ဘူးထင်တဲ့ဒူးနာဒီဆေးနဲ့မှပျောက်တော့သည်ဟုညွှန်းဆိုထားသဖြင့်မှတ်သားထားသည်နှင့်အတူဖော်စပ်လိုက်ပါတော့သည်။ ဆေးဖော်ထားပြီး၃-၄နှစ်အကြာမဝေဒနာရှင်တစ်ဦးနဲ့တွေ့ပါသည်။သူကတော့မိမိအိမ်သို့လာလည်သောအသက်၆၅နှစ်ခန့်ရှိအမျိုးသမီးကြီးဖြစ်သည်။ ...
အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးကြပြီး စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအကြောင်းအမှန်တရားကိုမြတ်နိုးကြပြီး စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအကြောင်း
အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးကြပြီး စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများသည် ယေဘူယျ အားဖြင့် အမှန်တရားကို မြတ်နိုးကြပြီး တစ်ယောက်ထဲ နေထိုင်ရခြင်းကို နှစ်သက်တက် ကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်နေပါစေ ကိုယ်ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ ပျော်ရွှင်လာအောင် အဆင်ပြေအောင် ...
သင်ဘယ်အချိန် အိမ်ထောင်ကျနိုင်ပြီး၊အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းနိုင်ပါ့မလား ?သင်ဘယ်အချိန် အိမ်ထောင်ကျနိုင်ပြီး၊အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းနိုင်ပါ့မလား ?
သင်ဘယ်အချိန် အိမ်ထောင်ကျနိုင်ပြီး၊အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းနိုင်ပါ့မလား ? နှလုံးလမ်းကြောင်းဖြင့် နီးစပ်သော မျဉ်း ဒီလို မျဉ်းမျိုး တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခု ရှိရင်တော့ သင်က အိမ်ထောင် စောကျကိန်း ရှိပါတယ်။အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့ ။ ...
ယူကရိန်း-ရုရှားစစ်ပွဲရဲ့ တင်းမာတဲ့အခြေအနေကြားမှာ ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးငယ်လေးအား မျက်ရည်စက်လက်ဖြင့် နှုတ်ဆက်ခဲ့ယူကရိန်း-ရုရှားစစ်ပွဲရဲ့ တင်းမာတဲ့အခြေအနေကြားမှာ ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးငယ်လေးအား မျက်ရည်စက်လက်ဖြင့် နှုတ်ဆက်ခဲ့
ယူကရိန်း-ရုရှားစစ်ပွဲရဲ့ တင်းမာတဲ့အခြေအနေကြားမှာ ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးငယ်လေးအား မျက်ရည်စက်လက်ဖြင့် နှုတ်ဆက်ခဲ့ ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်က ယူကရိန်းကို စစ်ကြေညာပြီး တိုက်ခိုက်ရန် အမိန့်ပေးပြီးနောက် အထိတ်တလန့်နှင့် ပရမ်းပတာအခြေအနေများ ဖြစ်လာသည်။ အာဏာသိမ်းမှုကြားတွင် ယူကရိန်း၌ ပိတ်မိနေသော လူများ၏ ...
ထူးဆန်းတဲ့အသံကြားပြီးနောက် အိမ်သာထဲကနေ ဆယ်နှစ်ကြာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ iPhone ကိုတွေ့ရှိထူးဆန်းတဲ့အသံကြားပြီးနောက် အိမ်သာထဲကနေ ဆယ်နှစ်ကြာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ iPhone ကိုတွေ့ရှိ
ထူးဆန်းတဲ့အသံကြားပြီးနောက် အိမ်သာထဲကနေ ဆယ်နှစ်ကြာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ iPhone ကိုတွေ့ရှိ ထူးထူးဆန်းဆန်း အသံတစ်ခုကြားပြီးနောက် အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်က ဇနီးဖြစ်သူ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရှာဖွေဖို့ သူ့အိမ်သာကိုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ Becki Beckmann ရဲ့ခင်ပွန်းဟာ အိမ်သာကို ...
Facebook group မှာ သူမရဲ့တက်တူးကို လူသိရှင်ကြား လှောင်ပြောင်နေတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကြောင့် အမျိုးသမီးဒေါပွသွားရFacebook group မှာ သူမရဲ့တက်တူးကို လူသိရှင်ကြား လှောင်ပြောင်နေတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကြောင့် အမျိုးသမီးဒေါပွသွားရ
Facebook group မှာ သူမရဲ့တက်တူးကို လူသိရှင်ကြား လှောင်ပြောင်နေတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကြောင့် အမျိုးသမီးဒေါပွသွားရ ဆိုးရွားသော တက်တူးထိုးခြင်းသည် အဆန်းမဟုတ်ပေ။ မရေမတွက်နိုင်သော တက်တူးပုံများကို အားလုံးမြင်နိုင်ရန် မျှဝေသည့် Facebook ကဲ့သို့သော ဆိုက်ဒ်များတွင် အဖွဲ့များစွာရှိကြသည်။ ...
ဗလာဒီမာပူတင်ဟာ ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်စိုးလိမ့်မည်ဟု ဘူဂေးရီးယား မျက်မမြင်ရှေ့ဖြစ်ဟောသူတစ်ဦးမှ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ဗလာဒီမာပူတင်ဟာ ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်စိုးလိမ့်မည်ဟု ဘူဂေးရီးယား မျက်မမြင်ရှေ့ဖြစ်ဟောသူတစ်ဦးမှ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့
ဗလာဒီမာပူတင်ဟာ ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်စိုးလိမ့်မည်ဟု ဘူဂေးရီးယား မျက်မမြင်ရှေ့ဖြစ်ဟောသူတစ်ဦးမှ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ လူသားများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အနာဂတ်ကို သိချင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် မသေချာမရေရာဖြစ်နေသည့် ယခုလိုအချိန်မျိုးမှာ လူတိုင်းက နောက်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာ သိချင်ကြသည်။ ယူကရိန်းကိုစစ်ကြေညာခဲ့သည့် ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၉/၁၁ ...
အမြောက်နဲ့ပစ်လို့ မိသားစုတွေ ကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးလာရတာကြောင့် ကလေးငယ်လေးကို ယူကရိန်း လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးစခန်းမှာ မွေးဖွားခဲ့ရအမြောက်နဲ့ပစ်လို့ မိသားစုတွေ ကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးလာရတာကြောင့် ကလေးငယ်လေးကို ယူကရိန်း လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးစခန်းမှာ မွေးဖွားခဲ့ရ
အမြောက်နဲ့ပစ်လို့ မိသားစုတွေ ကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးလာရတာကြောင့် ကလေးငယ်လေးကို ယူကရိန်း လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးစခန်းမှာ မွေးဖွားခဲ့ရ မြို့တော်ကိယက်ဗ်ရှိ ရုရှားစစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ခိုလှုံရန်ရောက်ရှိလာသည့် မိသားစုဟာ ယူကရိန်းလေကြောင်း စီးနင်းမှုစခန်းတစ်ခုတွင် Mia ဟုခေါ်သည့် ကျန်းမာသော ကလေးငယ်တစ်ဦးကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ ...
လူ့ဘဝက အကြွေး ဘယ်လောက်တောင် ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ ဆိုတာလူ့ဘဝက အကြွေး ဘယ်လောက်တောင် ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ ဆိုတာ
လူ့ဘဝက အကြွေး ဘယ်လောက်တောင် ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ ဆိုတာ လူ့ဘဝတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တင်ရှိနေသော အကြွေးကားကြောက်စရာပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။တင်ရှိနေသော အကြွေးကား ရောက်ရာဘ ဝဖြင့် လာဆပ်ရသည်မှာ ကြောက်စရာပင် ဖြစ်ပါတော့သတည်း။ မိုးဦးကျရာသီ၏ တစ်ခုသော နံနက်အစောတွင်ဖြစ်သည်။မလှလူသည် ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက ...